>ရမ်ဘိုနဲႚ ရုပ်ရင်ြရုံထဲက ခဵစ်သော ဗမာူပည် | MoeMaKa Burmese News & Media
>Tu Maung Nyo - On Regime's 28/2011, Amnesty
>9th Annual Burmese Literary Talk (8th Nov 2008) - Daw Mar Mar Aye
>Sydney Burmese Fund Raising for Earthquake hit Victims - Burma &amp; Japan
အရှင်စန္ဒိမာ (မွန်စိန်တောရ) - မောဟမှိုင်းကြားမှ မြေဇာပင်များ
ဗိုလ်ထက်မင်း - ငြိမ်းချမ်းရေးမြတ်နိုးရင် တပ်မတော်သားများကို ဘာကြောင့် အဓမ္မ စစ်တိုက်ခိုင်း နေရတာလဲ ?
အလှူဒါန လက်နှင့်မကွာ ရွှေစင်စကြ်ာ
>passport for former political prisoners?
မိုးမခအထောက်တော် - ကနေဒါနိုင်ငံမြို့တော်တွင် ပစ်ခတ်မှုများ ဖြစ်ပွား၊ စစ်သားတဦး သေဆုံး
>ရမ်ဘိုနဲႚ ရုပ်ရင်ြရုံထဲက ခဵစ်သော ဗမာူပည်
ရမ်ဘိုနဲႚ ရုပ်ရင်ြရုံထဲက ခဵစ်သော ဗမာူပည်
ဇန်န၀ၝရီ ၂၉၊ ၂၀၀၈
ငၝတို ရမ်ဘို ဒီနေႚ သြာုးကည့်ုကတယ်။ သောုကာနေႚက ရုံတင်တာပၝ။ ဗမာူပည်ထဲကို ခရစ်ယန်အဲန်ဂဵီအို အဖြဲႚ၀င်တေကြို ၀င်ကယ်တဲ့ ဇာတ်လမ်းပၝ။
ဗမာသရုပ်ဆောင်တြေ ပၝတယ်။ ဒီကာူးပီးမြ စက်တင်ဘာ အရေးအခင်ူးဖစ်ပေမယ့် ပထမဆုံး ကား မစမီ လက်ရြိုံင်ငံရေးအခင်းအကဵင်းနောက်ခံ စက်တင်ဘာအရေးအခင်းက ပုံတြေူပတယ်။ ဘုန်းဘုန်းတိုႚ ဆိံ္ဋူပနေတာတြေ။ စီအဲန်အဲန်ကူပတဲ့ စစ်သားတြေ ကေဵာင်းသားကြိုိံပ်စက်တာတြေ အကုန်ူပတယ်။
မိတ်ဆေတြယောက်ကဆိုရင် ရုံရြေႚမြာ လက်မတ်ြဝယ်ူပီးကို လာသမ္တွ ဗမာတေအြကုန် သူဝယ်ူပတယ်။ ရုံထဲမြာ ဗမာတြေ အူပည့်ပဲ တဲ့။
စစ်သားတယောက်ကို သတ်လိုက်ရင်၊ လူတေကြ ကလေးတေလြိုပဲ။ အကုန် လက်ခုပ်တီုးကတာ၊ သူတိုႚ လုပ်ခဵင်တာတေပြေၝ့ဟာ။
ငၝလည်း စစ်သားတေကြ ကရင်မိသားစုတေကြိုိံပ်စက်တာတြေ ရိုက်ူပထားတော့၊ အခုနယ်စပ်မြာ ရြာပုန်းရြာရြောင် ကရင်မိသားစုတေရြဲႚ တကယ့်အူဖစ်အပဵက်တေမြိုႚ အင်မတန်သနားဖိုႚ ကောင်းပၝတယ်။
ူပကက်ြတေကြတော့ ရက်စက်တယ်။ သြေးသံတရဲရဲပဲ။ နောက်ဆုံး ဇာတ်သိမ်းခန်းကတော့ စစ်သားတေကြို ရမ်ဘိုတိုႚက အူပတ်ေူခမနြ်း သတ်ပစ်တာမိုႚ၊ တကယ်ဆို ၀မ်းသာရမြာ။ ငၝတော့ ၀မ်းမသိာိုံင်ဘဲ မဵက်ရည်တောင် ကဵမိပၝတယ်ဟာ။
စစ်သားတေကြို သနားလိုႚ မဟုတ်။ သနားစရာလည်း မရြိ။ ဒၝပေမဲ့ ကိုယ့်အူဖစ်က ဗမာစကားေူပာနေတဲ့ ကိုယ့်ဗမာတေကြို ရက်ရက်စက်စက်သတ်ူပနေတာကို လူမဵြိူးခားတေဘြက်က အားပေးရမလိုဖစ်နေတာကိုး။
ကမ္တာမြာ ဗမာအေုကာင်းရိုက်ရင် ရိုက်စရာတြေ တပုံကီး၊ ဗမာက ကမ္တာမြာ အယဉ်ကေဵးဆုံးလူမဵြိးဆိုတာပဲ ရိုက်မလား။ အရမ်းလတြဲ့ ဗမာ့ရေေူမတောတောင်အလကြိုပဲ ရိုက်မလား။ သယံဇာတတေကြိုပဲ ရိုက်မလား၊ ထောင့်မဵြိးစုံကရိုက်ိုံင်ပေမယ့်၊ မတ်ြတမ်းတင်မယ့် အတင်ခံရတော့ ကိုယ့်အခဵင်းခဵင်ူးပန်သတ်၊ြိံပ်စက်တဲ့ လူမဵြိး၊ ကိုယ့်သာသနာစော်ကားတဲ့ လူမဵြိးလိုႚ (လက်တဆုပ်စာ သူတိုႚေုကာင့်) ရုပ်ရင်ြတောင် ရိုက်ရတဲ့ အူဖစ်ကိုး။
သတ်လိုက်တာလဲ ရက်ရက်စက်စက်ပၝပဲ၊ ငၝ့မြာ ရုပ်ရင်ြရုံထဲကူပန်ထက်ြလာတဲ့အထိ ငၝတိုႚဗမာူပည်သူတေရြဲႚအူဖစ်ကို စဉ်းစာူးပီး မဵက်ရည်မဆည်ိုံင်ဘူး။ နောက်တခေၝက်ူပန်မုကည့်ခဵင်တဲ့ ရုပ်ရင်ြလိုႚ မတ်ြတမ်းတင်လိုက်ပၝတယ်၊